Hetsika « Sosialim-bahoaka » : namboraka ny ahiahiny tamin’ny filoha Rajoelina ny teny Alasora | NewsMada
Hetsika « Sosialim-bahoaka » : namboraka ny ahiahiny tamin’ny filoha Rajoelina ny teny Alasora
Manakaiky vahoaka ara-bakiteny. Nitohy, omaly teny amin’ny kaominina Alasora, distrikan’Avaradrano ny fizaran’ny filoha Rajoelina mivady ny fanampiana « Sosialim-bahoaka ». Nihaino mivantana ny olan’ny mponina manoloana ny fizarana Vatsy tsinjo, tahaka ny tamin’ny toerana hafa nandalovany ny tenany. Nisehoana savorovoro teny an-toerana noho ny tsy fahitan’ireo tokantrano ny anarany tao anatin’ny lisitra kanefa voasokajy anatin’ny sahirana ary nahavita ny fisoratana anarana. Nidina an-dalambe izy ireo ary nifanaretsaka tsy nifankahitana, naneho ny tsy fahafaliany. Namba­ran’izy ireo fa misy ny tsirambina ataon’ny tompon’andraikitra ka maro ny sahirana tsy tafiditra anaty lisitra. Mazava ny valin-tenin’ny filoha Rajoelina. « Tsy maintsy hisy ny fandaminana amin’ny fizarana ny fanampiana. Tsy midika ho tsy mahazo intsony ireo tsy nahazo ny tapakila androany (omaly). Mbola hitohy hatrany amin’ny 15 andro ny fizarana ka tsy maintsy mahazo avokoa ny rehetra », hoy izy.
Tsy misy voailika na resaka politika na finoana
Nanamafy ny filoha fa mahazo ny anjarany avokoa ireo rehetra manana karnem-pokontany ara-dalana ka tsy mbola nisy fitomboka tao anatiny. « Tsy hisy ihany koa ny fitanilana amin’ny fizarana. Tsy manavaka aho amin’ny fizarana ny « Sosialim-bahoaka » fa hahazo avokoa na inona antoko politika na inona finoana », hoy ihany izy. Nisitraka tamin’izao andiany voalohany izao ny tokantrano miisa 1000 teny amin’ny kianja Maitso Alasora. Tsy hijanona eo anefa fa handefa ny solontenany ny ministera, ny avy amin’ny governora sy ny fikambanana Fitia, ny filoha hiaraka hanara-maso ny fitantanana ny fizarana.
Fanentanana ny ampiasana ny tambavy CVO
Hijery akaiky ny fitarainan’ny vahoaka, velon’ahiahy amin’ny tsy fisian’ny mangaraharaha amin’izany izy ireo. Nanome baiko ny hanatanterahan’ny ben’ny Tanàna ny kaominina Alasora sy ireo sefo fokontany ny asany ara-dalàna ihany koa ny filoha. « Tsy miady irery isika vahoaka fa mijoro ma­nampy azy ny fanjakana miatrika izao ady amin’ny covid-19 izao. Antony nanomezana fa­nampiana sahaza sy maharitra ho an’ny tokantrano izany », hoy ihany ny filoha. Na­nentana hatrany ny hampiasana ny tambavy CVO ny filoha entina hiarovan-tena amin’ny covid-19.
Synèse R. sy Mi. Raz